Hichapụ music si iPod na ogbe
> Resource> iPod> Olee otú iji Hichapụ Music si iPod na ogbe
Ihichapụ music si iPod na ogbe bụ nnọọ ikike mgbe ị nwere ọtụtụ achọghị songs na gị iPod, nke na-egbochi gị importing ọkacha mmasị gị faịlụ. Ọ bụrụ na ị na-ekpebi iji iTunes wepụ songs site ihichapụ music nchekwa na kọmputa gị na mgbe ahụ syncing music gị iPod, ị nwere ike hapụ ọkacha mmasị gị songs. Ọ bụrụ na ị na-ahọrọ na-aka jikwaa gị iPod na iTunes, ị nwere ike ihichapụ songs ma ọ bụ listi ọkpụkpọ otu otu. Gịnị ma ọ bụrụ na ị nwere tọn songs na ị chọrọ ka ihichapụ? Ị ka wepụ songs otu mgbe ọzọ?
Dị nnọọ mbà echiche banyere otú ka ihichapụ music si iPod na iTunes ugbu a. Ebe a bụ ike ma dị mfe na-eji iPod music iwepụ ngwá ọrụ. Ọ bụ Wondershare TunesGo (Windows) ma ọ bụ Wonershare TunesGo (Mac). Na ya, ị dịghị mkpa ka mmekọrịta gị iPod na iTunes, ma ọ bụ ị na-etinye oge dị ukwuu na ihichapụ songs otu otu. Kama, ị na-enwe ike iji wepụ gị achọghị songs na ogbe.
N'okpuru ebe a bụ ihe zuru ezu nkuzi. Ya mere ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata otú wepụ songs si iPod aka, ibudata a omume na wụnye ya na gị PC.
Cheta na: The Windows version akwado iPod aka 5/4/3. N'ihi na Mac version ọrụ, ị nwere ike na-yiri nzọụkwụ wepụ songs si gị iPod aka 5/4.
Olee ka ihichapụ songs si iPod aka
Nzọụkwụ 1. Jikọọ iPod aka gị na PC na-agba ọsọ a usoro
Nke mbụ niile, jikọọ gị iPod aka na PC site eriri USB. Mgbe ahụ na-agba ọsọ a iPod music iwepụ ngwá ọrụ. Mgbe a usoro-achọpụta rụọ gị iPod aka, ọ ga-egosipụta gị iPod aka na n'ụlọ window.
Cheta na: Wụnye iTunes na PC gị. Ma ọ bụ ị pụrụ ịgbaso iTunes echichi window iji wụnye ya mgbe ị malite TunesGo.
Nzọụkwụ 2. Nhichapụ music si iPod aka
Iji mezuo ọrụ, ị kwesịrị ị pịa "Media" emi odude ke ekpe panel. Ekem, ke media window, pịa "Music" iji bugote music management window.
Họrọ gị achọghị songs. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ihichapụ niile songs, ị dị nnọọ mkpa họrọ otu song na mgbe ahụ jide "Ctrl + A". Na, na, pịa "Hichapụ". Mgbe obere window ogosiri-echetara gị "Ì ji n'aka na ị chọrọ ka ihichapụ họrọ music on iPod?" ị kwesịrị ị na pịa "Ee". Mgbe ahụ, a iPod music iwepụ ngwá ọrụ na-amalite ka ihichapụ music.
Ọ bụrụ na ị chọrọ kpọmkwem ewepu ọtụtụ listi ọkpụkpọ na-adịghị nke smart listi ọkpụkpọ na gị iPod, pịa "Playlist" ke hapụrụ ndekọ osisi na-emeghe playlist window. Dokwara, họrọ listi ọkpụkpọ ị chọrọ iji wepụ na pịa "Hichapụ".
Cheta na: dị ugbu a, ị na-agaghị ekwe ka ihichapụ smart listi ọkpụkpọ.
Ọfọn, na ihe niile banyere ihichapụ songs si iPod aka. Ọ dị mfe, ọ bụghị ya? E wezụga ihichapụ music, ị nwere ike ihichapụ ọtụtụ videos na gị iPod dị ka mma.